ဘဝမှတ်တိုင်: Android အတွက် FIFA14 World Cup APK
Android အတွက် FIFA14 World Cup APK
ဘောလုံးပရိသတ်များကြိုတင်စိတ်လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက် ပွဲစဉ်များနဲ့၂၀၁၄ ကမ္ဘာဖလားရဲ့အကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်းသိရှိနိုင်မယ့် WorldCup 2014 android app ကိုဘောလုံးဝါသနာရှင်များအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး Developer ကို ဝေယံမင်းမှရေးသားထားပါတယ်။
ဒီ App လေးကိုရေးနေတာတော့ကြာပြီဖြစ်ပြီး Graphic ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်မှုများကြောင့် အနည်းငယ်ကြန့်ကြာသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီ App မှာဆိုရင်တော့
၁ . ကမ္ဘာဖလားအုပ်စုပွဲစဉ်များမှအစဗိုလ်လုပွဲအထိပွဲစဉ်များနှင့်နေ့ရက်၊အချိန်များ
၂ . နေ့စဉ်ကျင်းပသွားမည့်ပွဲစဉ်များ
၃ . အုပ်စုအလိုက်ပွဲစဉ်ဇယားများ
၄ . ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ့်ဘောလုံးကွင်းများ
၅ . အသုံးပြုသွားမယ့်ဘောလုံးနှင့် Theme song များ
၆ . ဘရာဇီးနိုင်ငံဧ။်ဘောလုံးကွင်းတည်ရှိရာမြို့များ
၇ . ကမ္ဘာဖလားနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ Update ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
Time ကတော့ According to Fifa ပါ။
Graphic ကတော့ Bizzurp Myanmar Group ပါ။
လိုအပ်သောအချက်အလက်များကို Fifa.com မှရယူပါတယ်။
Google Play မှာတော့မတင်တော့ဘူးဗျာ
အောက်မှာ Download link တွေပါ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/09/2014 08:01:00 am